“Berberaay Miiskiin Koriyaay, Wallee Berbera Laga Maqnaan Waa!!-Prof. Maxamed Siciid Gees | Berberatoday.com
“Berberaay Miiskiin Koriyaay, Wallee Berbera Laga Maqnaan Waa!!-Prof. Maxamed Siciid Gees
Sannadihii lixdamaadkii ee ay dawladihii rayidka ahaa ay ka talinaysay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed, intaan askartu afgembiga samayn, ayaa la sheegay in macdanta Uranium (Yuraaniyam) laga helay meel la yidhaahdo Caliyo Geele oo ku taal Gobalka Baydhabo. Markiiba fannaaniintii oo dawladda u shaqeeya (Waa inaan fannaaniintu aanay xukuumad u shaqayn oo mushahar ka qaadan) ayaa soo saaray hees ahayd “Caliyaw geele, Caliyaw Geele, ayaa caalamku haybinayaa.”
Ka illaali kuwa Muslinka sheeganaya, Khawaajaha u dhiib. Ninkii geelisa waraabsanayey waxa uu yidhi; ‘Ka fogay fagaasiyo halkii Faarax Hagar joogo.’ Qolladaas oo waqtigaas ahaa magafaha Hawdka.
Sawiradaas ayaa shaashadda maskaxda soo marayaa marka magaca Berbera aan maqlo, hadda meelahaasi waa kharaabadu sida carabtu tidhaahdo waa Adlaal. “Daarihii ayaa callaacalay, markay tabeen dadkoodii eh.”
Giriigu waxay magaalada odhan jireen oo ay ku muujiyeen khariidadaha, magacaMalbo, waxay noqon kartaa Malabo. Waddaddii hore ee Bixin iyo Majacaseeye meelaha biyaha leh mari jirtay, intaan laamida Wershadda Sibidhka marta la samayn, waxay ka soo dhici jirtay Suryo Malabo, sidaa darteed Magaaladu waa Malabo.
Berbera waxa uu bixiyey Carabta oo ka dembeysay Giriiga sida ay Waqooyiga Afrika ugu bixiyeen Barbari Coast. Xeebihi Berberka iyaga oo ka soo qaatay ereyga dadkii Rooma ku soo duulay ee la odhan jiray Berberiyaanka.
Saamigaas baxaarida ayaannu ku noolayn, waxananu dhegaysan jirnay heesta baxaaridu qaadayso markay shiraaca saarayaan ama barroosinka qaadayaan ama ay seebinayaan oo isla helaan seebka “Sheeliyaa, sheeliyaa …” La garan maayo afka ay ku heesayeen.
Doonbiradii oo ka soo bilaabmi jirtay xaafaddii qoyanta ee baddu xaggaagii kusoo jabi jirtay ee muusiga iyo sanam wada muraayad iyo baalal madaw iyo kuul kala nooc nooc ah lagu qurxiyey oo dumar makaalif ihi oo ku dhaantaynayaa muusiga iyo rag dhar la xardhay sita ay wada qaadi jireen heeso af aan la garanayn, ayaannu daba carrari jirnay oo xiisayn jirnay. Shallaadkaas ayaa ilaa badweynta Batallaale lagu tegi jiray. Waar meeshu waxay ahayd wada shaqo, ciyaaro iyo siyaarooyin iyo dad kala midab iyo kala af ah. “Allow yaa guyaal tegay, Gadaal u soo celiyoo, Gaadhsiiya waxa uu geystay gabawgii!!.”
Soomaalidu badda waa ka baqdaa bal hadal-haysyadan dheeho, “Illeyn geed la qabsadaana; haddaan baaxad leeyahay badda saw ma jiidheen; Allayleh eh bad baan baan galay.” Baddaasi ayaa dhallintii ku dhammaatay oo Sheekh, Siyaasi , Suldaan, Abwaan iyo cid waliba waa ka naxaday oo ka hadashay, ninba kaskii kor teg. Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa xikmaddii sannadka sheegay oo waxa uu yidhi “Waar tahriib la dayn waa ee dhallinta dabbaasha ha la baro.” Waar dee dabbaashaa sii barta dhallinta tacabiraysaay.
Sida warbaahinta koonfureed sheegtay siddeed boqol (800) oo fiise ayaa safaaradda Masar ku leedahay Xamar laga qaatay oo ay ka codsatay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya. Wakiillo ayaa Somaliland u jooga oo fududeeya fiisayaasha iyo baasaboorada iyo waraaqaha kale ee loo baahdo.
Deeqihii waxbarashada dibedda, shaqadii Hay’adahii dhawrta bixiyayaasha intiiba Xamar ayaa laga bixiyaa, iyada oo markan dollar lagu gatto. Waa intii goonni-isu-taagga loogu qaatay. Findhicilku ma xallaalbaa mise waa xaaraan? Waa lays waydiiyay! Jawaabtii waxay noqotay; soo qaadkiisa ayaaba diiday. Mar kasta Khayrqabe Siyaasi, waxa uu leeyahay “Walaalaheen Reer Soomaaliya, Walaalaheen Reer Djibouti, Walaalaheen Reer Masar, Walaalaheen Sucuudiga, Walaalaheen Turkiga, Walaalaheen Imaaraadka.” Nin ayaa laga hayaa; “Waar qaar aynu habaro-wadaag nahay miyaan ku jirin?” habraha ayaa naxariis badan eh. Tani waxay la mid tahay sheekadii Aw Rifaaci.
Aw Rifaaci waxa uu ahaa nin reer Laas-qoray ah oo ilbax ah oo badmareen ah oo Ina Cabdulle Xasan uga keeni jiray Cadan; cadarka, dharka, xalwadda iyo sabiibta, deeto waa xujuubay ayaa la sheegay. Jidh–dil (Torture) ayaa lagu sameeyey, habkan Maraykanku soo saaray ee Joonyadda madaxa la isu geliyo, kadibna biyaha la isku hafiyo (Water boarding) ma la aqoon. Waxa Daraawiishtu adeegsan jirtay rag la tabbabaray oo ilka fiiqfiiqan oo ilkaha ku googooya eedaysanaha xujoobay.
Aw Rifaacii ayaa qoladii lagu fasaxay oo ilkaha ku boobay, kadibna markaas ayuu jalaaday, haseyeeshee cidina dheg uma jalaqsiin. Markii loo keenay Ina Cabdle Xasan ayuu Aw Rifaaci weydiiyey oo ku yidhi “Maxaad yaa Muslimaay u odhan weyday?” Aw Rifaaci waxa uu ku jawaabay, “Muslinku saw kan i cunaya.” Hadda walaaluhu saw kuwan ina takooray ee ictiraafka inoo diiday!
Dhallinta Illaahay ha u naxariisto ehelkoodiina samir iyo iimaan ha ka siiyo, maadaama hadda waxbarashadii ay ku koobnaatay xifdi iyo gabay oo Carabigii iyo Ingiriisidii waagii hore la baran jiray, xirfadi ha joogtee iyana la waayey.
Dhallintu iyada oo aan af kale aqoon ayey tacabireen, deeto doon qudha ayey dawar boqol ku wada raaceen. haddii ay xattaa af carbeedka wax ka garan lahaayeen dadka ayey kala dhexgeli lahaayeen ee sidii xoolaha looma rareen. Sida Suldaan Maxamed Sheegay waar Manhajka dugsiyada ha lagu daro dabbaasha, gaar ahaan kuwa xeebaha ku yaalla. Bishan gudaheeda afar carruur ah ayey baddu ku liqday Berbera iyo Lughaya.
Haddaba dhinaca Banaadir ayaa Shiicadu ku fiday oo waa ta kaga tegtay Madax-dhaqameedka la baxa imam, sida Imam Khumayni! Madaxweyne Xasan Shiikh Madax-dhaqameedkiisu waa Imam. Waxa la yidhaahdaa istunka magaaladda Afgooye ee sannadkii mar la qabtaa waxa uu ka soo jeedaa is-garaacidiiCaashuura ee Shiicada!! “Labayk yaa Xuseyn!!”.
Dhinaca xeebaha galbeedka waxa ku fidayey Islaamka Suniga ah, kaas oo Turkigu xoojiyey oo waaka masaajiddada ka dhisay Berbera iyo Saylac, oo waa ta dabdeed keentay in Madax-dhaqameedyadii ay qaateen magaca Suldaan. Magacaas oo ka soo jeeda dawladdii Turkiga. Madaxweyne Axmed Maxamed (Siilaanyo) Madax-dhaqameedkiisu waa Suldaan aniga waa Suldaan. Waar wax salaaddu isu qabsan weyday, illeyn laba ardaa ayaan ka soo kala jeednaa qolooyinka Konfureed!!